Marine Boilers Questions & Answers ~ MSU Portal
ကျွန်တော့်ရဲ့..ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ..စာအုပ် (၅) အုပ်မြောက်ပါ..။
ရေယာဉ်တည်ဆောက်ခြင်း..လုပ်ငန်းနဲ့..ပါတ်သက်တဲ့..စာအုပ်လေးတစ်အုပ်..ရေးလက်စ. .ရှိပါတယ်..။ အဓိက..ကတော့..သူများဆီမှာ..စာသွားသင်ခဲ့တုန်းက..သိခဲ့ရတာလေးတွေကိ..အခြေခံပြီး.. သူများတွေ..ဘယ်လို..သဘောင်္ဆောက်တယ်...၊ဘယ်လို..စည်းစနစ်တွေရှိတယ်..၊ ဆိုတာ..ကို..လူငယ်တွေ..ကို..သိစေချင်လို့..ရေးထားတာပါ..။ ဒါပေမဲ့..ချောဘို့..လိုနေတာရယ်..။
စာအုပ်တွေ..ထုတ်တိုင်း..အိမ်တွင်းဘတ်ဂျက်ရေးရာ..၀န်ကြီးဌာန..နဲ့. အဆိုပြုခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်းများ..၊ လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရယ်..။
အိမ်တွင်း လွှတ်တော်မှာ..ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ..အသုံးစားရိတ်များ..ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြဌာန်းခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း များရှိနေတဲ့..အတွက်ရယ်..။
၂၀၁၄ သို့မဟုတ်..၂၀၁၅ ဘတ်ဂျက်..ကြမှာဘဲ..ထုတ်ဝေ..ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..။
Face Book ပေါ်မှာ..ရေးထားတဲ့..ပေါက်တတ်ကရလေးဆယ်..၊ ဟိုတွေး..ဒီတွေး.. ဖောက်ထွက်အတွေး..၊ ကန့်လန့်..အတွေးများကို..စုပြီး..စာအုပ်ထုတ်မယ်လို့..စိတ်ကူးပါတယ်..။
Like 1000 ပြည့်ရင်..စာအုပ်ထုတ်ပါ့မယ်..။
မပြည့်ရင်လည်း..ကိုယ့်ဘာသာ..Profile အတု..၉၉၉ ခုဖွင့်ပြီး..Like..လုပ်လိုက်ပါ့မယ်..။
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ..အသုံးစားရိတ်..ပြင်ပ..ချေးငွေ..ရရှိမှု..အနေအထားများနဲ့..ဆက်စပ်စဉ်းစား တဲ့..အခါမှာ..သူ့ထက်ပိုအရေးကြီးနေတဲ့..အိမ်တွင်းဆိုင်ရာ..ဦးစားပေးစီမံကိန်းများ..ရှိနေတဲ့.. အတွက်..လှိုင်သာယာမှာ..၀ယ်ထားတဲ့..မြေကွက်လေး..ရောင်းချရမှု..အပေါ်မှာ..မူတည်ပြီး.. စီမံကိန်းများကို..ဆက်လက်..အကောင်အထည်..ဖော်သွားမှာ..ဖြစ်ပါတယ်..။
အခု..ဖော်ပြပါ..စီမံကိန်း..အဆိုပြုချက်များကို..ကိုယ့်ဘာသာ..တင်မြှောက်ထားတဲ့.. အိမ်တွင်းစီမံကိန်းဝန်ကြီးက..တင်ပြ..ပြီး..၊ သူ့ဘာသာ..ဘဲ..ထောက်ခံပါတယ်..။
Posted in: knowledge,literature,notice,ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ